Ngokuvamile, amawebhusayithi angaphandle acela ikhodi ye-ZIP uma ebhalisa umsebenzisi. Indlela yokucacisa lesi sifingqo, hhayi wonke umuntu owaziyo. Iyini ikhodi ye-ZIP? Kwafika kanjani futhi ngezizathu zini? Sizokutshela ngalokhu esihlokweni sethu.
Iyini ikhodi ye-ZIP?
Ikhodi ye-ZIP imelela i-Zone Improvement Plan, okusho ukuthi "uhlelo lokuthuthukisa indawo" ngesiNgisi. Ikhodi ye-ZIP yisistimu yamakhodi eposi e-USA. Bashayela inqubo yokulethwa nokuhlelwa kwezinto zeposi futhi benze imisebenzi efanayo njengezikhombo zaseRussia. Ngokungafani namadijithi ayisithupha avamile, ikhodi ye-ZIP ye-US inamaphesenti ayisishiyagalolunye, futhi abhaliwe ngephutha, isibonelo 12345-6789.
Umlando wokubukeka kwamakhodi eposi e-USA
Izinhlelo zeposi ze-United States zaqala ukusebenzisa amakhodi eposi ezinxenyeni zekhulu lokugcina. Bebeyizinombolo ezimbili futhi kwakusho isifunda seposi ngaphakathi kwemingcele yedolobha elilodwa.
Kakade eminyakeni engamashumi ayisithupha kuleli zwe kwakukhona isidingo sesistimu eyengeziwe. Kusukela ekuqaleni kukaJulayi 1963, selivele seliqalile kwimodi yokuhlola. Umdali walo kwakunguRobert Moon, isisebenzi se-US Postal Service. Kuyathakazelisa ukuthi izwe lingase lifunde ngo-1944 ukuthi ikhodi ye-ZIP iyini, lapho uRobert, njengomhloli weposi elula, enza lesi sihlukanisi.
Ikhodi ye-ZIP ngaleso sikhathi yayinezinhlamvu ezinhlanu, lapho izintathu zokuqala zikhomba khona isikhungo sokuhlunga izincwadi, amaphasela namaphakheji, kanye nezinombolo ezimbili zokugcina - inombolo yehhovisi leposi, lapho kwakuzofuneka khona. Kusukela ngo-1967, isimiso se-ZIP-indexing siye saqashelwa kulo lonke elase-United States. Ngaleso sikhathi eMelika, kuma-skrini e-TV, kwakukhona ngisho nomdwebi we-cartoon uMnu. Zip, noma i-Zippy, ekhuthaza izakhamizi ukuthi zingayinaki isimiso esisha.
Ngo-1983, kwakudingeka kube nzima futhi wanezela amanani amane, echaza indawo lapho kwakudingeka khona ukuhambisa izincwadi, isibonelo, indawo yokuhlala, ingxenye yesine, igatsha lenkampani noma ukwahlukana kwenhlangano.
Ekhuluma ngokuthi ikhodi ye-ZIP, awukwazi ukushiwo ukuthi ama-ejensi kahulumeni wase-US asebenzisa izinombolo ezikhethekile. Lezi zikhombo zamadijithi amahlanu nesishiyagalolunye angeke abe nomsebenzisi wezinsizakalo zeposi endaweni.